Weeraryahanka Kooxda Liverpool, Sadio Mane oo shaki laga galinayo kulanka Berri galab ee Premier League – Gool FM
(Liverpool) 16 Maaro 2019. Xiddiga garabka uga ciyaara kooxda kubadda cagta Liverpool ee Sadio Mane ayaa shaki laga galinayaa kulanka berri galab ay la leeyihiin naadiga Fulham ee horyaalka Premier League.
Mane ayaa qaab ciyaareed sare ku jira xilli ciyaareedkan, waxaana uu dhaliyey lix gool afartiisii kulan ee ugu dambeeyey oo uu ciyaaray tartammada oo dhan.
Xiddiga xulka qaranka Senegal ayaa labo goor shabaqa soo taabtay kulankii ay Arbacadii kooxda Bayern Munich ka reebeen Champions League, laakiin Jariiradda The Mirror ayaa warinaya in 26-sano jirkaan laga yaabo inuu seego kulanka berri ka dhacaya garoonka Craven Cottage.
Mane ayaan la tababaran shaxda kooxda Reds Jimcihii oo waa la nasiyey, illaa iyo haddana ma cadda inuu ciyaari karo kulanka berri ama inuu weeraryahankan dhaawac ku seegayo kulanka ay Liverpool u safreyso Galbeedka Magaalada London.
Ciyaaryahankan ayaan kooxda Liverpool u ciyaarin kaliya labo kulan 30 ciyaarood oo horyaalka Premier League ah xilli ciyaareedkan.
Kulanka dhexmari doona kooxaha Fulham iyo Liverpool ayaa la baasan doonaa sida qorshuhu yahay berri galab marka ay saacadda geeska Afrika tahay 5:15 galabnimo.